MyanCare | မွေးကင်းစလေးတွေကို ရေ နေ့တိုင်းချိုးပေးသင့်လား
မွေးကင်းစလေးတွေကို ရေ နေ့တိုင်းချိုးပေးသင့်လား
by myatlynn | Dec 17, 2020 | အဖြစ်များသော ကျန်းမာရေးပြသာနာများ
ဖေဖေမေမေတို့ကတော့ ကိုယ့်ကလေးကို သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် မွှေးမွှေးကြိုင်ကြိုင်လေးဖြစ်စေချင်ကြမှာပဲ။
အဲ့ဒီတော့ ကလေးလေးကို ရေချိုး ပေါင်ဒါလိမ်း ပြီး သန့်သန့်ပြန်ပြန့် ထားကြတာပေါ့။ ဒီတော့ ကလေးတွေကို နေ့တိုင်းရေချိုးပေးဖို့ လိုလား ?? မွေးကာစ၊ မွေးကင်းစလေးတွေကိုရော
ဘယ်အချိန်မှ စ ရေချိုးပေးကြမလဲ?
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးကတော့ ကလေးမွေးကာစကနေ အနည်းဆုံး နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ (၂၄ နာရီ) အကြာမှ ရေနဲ့ သန့်စင်ဆေးကြောပေးဖို့ အကြံပေးထားပါတယ်။
တချို့ကတော့ ၄၈နာရီ ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပို ကြာကြာနေမှ ချိုးပေးဖို့ ပြောကြပါတယ်။ ကလေးကို နေ့တိုင်းရေချိုးပေးဖို့ မလိုပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အချင်း ကြွေပြီး ချက်က အနာကျက်တဲ့ အချိန်ထိ စောင့်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါ နှစ်ခါလောက် မျက်နှာ၊ ခြေ၊လက်၊ ငယ်ပါတို့ ပေါင်ကြားတို့ကို ရေပတ်လေးနဲ့ တိုက်ပေးပြီး သန့်စင်ပေးတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
လေ့လာချက်တွေအရ ရေမိုးချိုးသန့်စင်ပေးတာ ခဏနောက်ဆုတ်ပြီး မွေးပြီးတာနဲ့ အမေနဲ့ ထိတွေ့၊ နို့တိုက်ကျွေး စတာတွေကို လုပ်ပေးတာ မိခင်နဲ့ ကလေး ရင်နှီးမှု ပိုရစေပါတယ်။
နောက်ပြီး ကလေးက မိခင်ဝမ်းကထွက်တာနဲ့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ထွက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရေမွှာရည်တွေနဲ့ တစ်ခါ တစ်ရံ အပေါ်က ဖယောင်းလို အဖက်အဖက်လေးကပ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒါတွေက ကလေးကို နွေးထွေးအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးရဲ့ အသားအရည် စိုထိုင်းမှုကို ထိန်းပေးတဲ့အပြင် ရောဂါကာကွယ်ပေးတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
တကယ်လို့သာ ကလေးကို မိခင်ဝမ်းကထွက်တာနဲ့ ရေချိုးတာ လုပ်မယ်ဆို ကလေးအတွက် သဘာဝကပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေ ရေနဲ့အတူပါသွားပါလိမ့်မယ်။
ကလေးမွေးကင်းစလေးတွေကို ရေမချိုးခိုင်းကြတာ ကလေးတွေက လူကြီးတွေကို ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ကို မထိန်းနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကို ရေချိုးပေးတဲ့ အခါ ကလေးနာမကျန်းတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကလေးကို ဆေးရုံကနေ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ရေပတ်တိုက်ရမယ့် အချိန်ကျရင်လည်း တိုက်ပြီးတာနဲ့ ကလေးကို နွေးနွေးထွေးထွေဖြစ်စေဖို့ အနှီးသေချာခြုံပေးရပါမယ်။
ကလေးကို ဘယ်လို ရေပတ်တိုက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်မလဲ ???
ကလေးကို မွေးကာစဆို ရေမချိုးသင့်ပါဘူး။ ကလေးချက်ကြွေပြီး တဲ့အထိ ရေပတ်တိုက် သန့်ရှင်းရေးပဲလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါတွေပြီးပြီဆို ကလေးကို ရေစချိုးရမယ့် အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါ၊ နှစ်ခါပဲ ရေချိုးပေးသင့်ပါတယ်။
ကလေးကို ရေပတ်တိုက် သန့်စင်တဲ့ အခါ ဘာတွေ လုပ်သင့်မလဲ။ ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ ??
ကလေးကို ရေပတ်တိုက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆို ကလေးကို ပေါင်ပေါ် ဒါမှမဟုတ် ရေပြင်ညီ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာထားပါ။
အားမသန်တဲ့လက်နဲ့ ကလေးနဲ့ လည်ပင်းနဲ့ခေါင်းကို အမြဲကိုင်ထားရပါမယ်။ နောက်လက်တစ်ဘက် က ဘေးကပစ္စည်းတွေယူပြီး ကလေးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရပါမယ်။
(ဒါကြောင့် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေတော့ လက်တစ်ကမ်းမှာ ထား, ထားရပါမယ်။)
ရေပတ်တိုက်မယ့်နေရာပဲတစ်လှည့်စီ ကလေး ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖော်ထားပြီး တစ်ခြားမတိုက်တဲ့နေရာတွေကို နွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်အောင် ထားရပါ။
ဂွမ်းကို ရေစွတ်ပြီး(အရမ်းမစိုရွဲပါစေနဲ့) ကလေးကိုမျက်လုံးတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။
သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့အခါ နှာခေါင်းဘက် အတွင်းကနေ အပြင်ဘက်ကို ဖွဖွလေး ဂွမ်းနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ မျက်လုံးတစ်ဖက်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးရင် နောက်တစ်ဘက်အတွက် ဂွမ်းအသစ်ကိုသုံးပါ။ (ဒါမှသာ တစ်ဘက်မှာ ရောဂါပိုးရှိရင် တစ်ဘက်ကို မကူးမှာပါ။)
အဲ့ဒီနောက် နားကိုလည်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ နားကြပ်တံနဲ့ နားအတွင်းထဲထိ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာတွေကို ရှောင်ပါ။ မျက်နှာ၊ ခြေလက် စတာတွေကို ဆက်ပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
ကလေးရဲ့ တင်ပါး၊ မွေးရာပါ ပစ္စည်းနေရာလေးတွေကို ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ သုတ်ပေးပါ။ နောက်ပြီး အဝတ်အခြောက်နဲ့ သေချာသုတ်ပေးပါ။ အထူးသဖြင့် အရည်ပြားအခေါက်ကြားတွေကို။ ရေကျန်နေရင် အနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကလေးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေချိန် စကားပြောပြီး လုပ်ပေးပါ။ သူတို့လေးတွေက အသံကြားရင်ငြိမ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဘာလုပ်ပေးလဲ ဆိုတာ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
ကလေးက ချက်ကြွေသွားပြီဆို ကလေးရေချိုးကန်လေးဖြစ်ဖြစ် ဘေစင်မှာဖြစ်ဖြစ် ရေနဲ့ချိုးပေးလို့ရပါတယ်။
ကလေးကို ရေမိုးချိုး သန့်စင်ပြီးရင်တော့ နွေးနွေးထွေးထွေး ထားပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။